News | Tag: office
जब यी दक्षिण भारतीय फिल्मले बक्स अफिसमा रेकर्ड बनाए
के तपाई अफिसको डेस्कमै खाना खानुहुन्छ ? यदी त्यसो हो भने तपाई ठूलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ
एजेन्सी । आजकाल अफिसमा आफ्नो डेस्कमा खाना खाने चलन बढिरहेको छ र अध्ययन अनुसार करिब दुई तिहाइ मानिसहरुले अफिसको डेस्कमै लञ्च गर्ने गरेका छन् । तर, एक अध्ययनका अनुसार अफिसको डेस्कमा खाना आनाले कर्मचारीहरुको काम गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ ।
राति काम गर्नुहुन्छ ? यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्
अक्षय कुमारको फिल्म ‘केशरी’ले गर्यो बक्स अफिसमा धमाकेदार कमाइ
एजेन्सी । दुई दिन अगाडि रिलिज भएको अक्षय कुमारको फिल्म केशरीले बक्स अफिसमा धमाकेदार कमाइ गरेको छ ।